प्रचण्डले राजीनामा मागेपछि ओलीको ‘सरप्राइज’ प्रस्ताव : वामदेव प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल अध्यक्ष ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रचण्डले राजीनामा मागेपछि ओलीको ‘सरप्राइज’ प्रस्ताव : वामदेव प्रधानमन्त्री, माधव नेपाल अध्यक्ष !
सरकार र पार्टी दुबै कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाउँदै ओलीले मार्गप्रशस्त गनुपर्ने आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डको आग्रहपछि जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफु मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको भन्दै एउटा ‘सरप्राइज’ प्रस्ताव राखेका थिए। ओलीको भनाई उधृत गर्दै ती सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने ‘ठिक छ म दुबै पद छाड्न तयार छु। तर त्यसका लागि मेरो एउटा सर्त छ। संविधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं। माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाऔं।’ ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा केहीबेर सन्नाटा छाएको थियो।